Vaovao - Inona no hitranga raha vaky ny gasket lohan'ny varingarina
Manampy an'izao tontolo izao izahay nanomboka tamin'ny 1991
Fanohanana mailaka xsb@ytsc.cn 805870329@qq.com
Fitaovana vy mifono vy
Andian-dahatsoratra fanoherana ny tabataba
Fitaovana Gasket Non Asbestos
FBYS Andiam-bola mahomby
Inona no hitranga raha vaky ny gasket lohan'ny varingarina
Tsy mandeha matetika ny lohan'ny vatan'ny motera sy ny famoahana ny rivotra. Ny fandoroana ny gasket amin'ny lohan'ny varingarina dia tena hanimba ny toe-piainan'ny motera, na tsy hiasa mihitsy aza, ary mety hiteraka fahasimbana amin'ireo faritra na faritra sasany mifandraika amin'izany; amin'ny famatrarana sy ny herin'ny herin'ny motera, ny famehezana ny habakabaka ambony amin'ny piston dia tsy maintsy simba, Tsy misy famoahana rivotra.
1. Fahombiazana tsy fahombiazana aorian'ny fanapahana ny gasket lohan'ny varingarina
Noho ny toerana samy hafa misy ny gasket lohan'ny varingarina dia hafa ihany koa ireo famantarana ny tsy fahombiazana:
tsofina eo amin'ny varingarina roa mifanila aminy
Teo ambanin'ny fiheverana ny tsy famadihana ny decompression dia nanetsiketsika ny crankshaft aho ary nahatsapa fa tsy ampy ny tsindry amin'ny varingarina roa. Rehefa natomboka ny motera dia nisy setroka mainty niseho, ary nihena be ny hafainganam-pandehan'ny motera, mampiseho tsy fahampian'ny herinaratra.
2. Fivoahan'ny lohan'ny varingarina
Ny entona misy tsindry mafy voahazona dia mandositra ao anaty lavaka lohan'ny varingarina na mivoaka avy eo ambonin'ny vatan'ny lohan'ny varingarina sy ny vatana. Misy sombin-kavo mavo maivana amin'ny famoahana ny rivotra. Rehefa matotra ny fivoahan'ny rivotra, dia hanao feo "mifanila" izy, indraindray miaraka amina rano na famoahana solika. Azonao atao ny mahita ny fiaramanidina lohan'ny varingarina sy ny manodidina azy mandritra ny fanaparitahana sy ny fizahana. Miharihary fa misy fametrahana karbonina ao amin'ny lavaka bolt an'ny lohan'ny varingarina.
3, ao amin'ny làlan'ny solika gazy
Ny etona mahery vaika dia mirohondrohona mankamin'ny lalan'ny diloilo manitra eo anelanelan'ny lohan'ny motera sy ny lohan'ny varingarina. Ny hafanan'ny solika ao anaty lasantsy dia avo be foana rehefa mandeha ny motera, mihabe ny viscosity an'ny menaka, mihena ny tsindry ary haingana ny mihasimba. Misy miboiboika ao anaty menaka alefa any amin'ny tapany ambony amin'ny lohan'ny varingarina mba hanosorana ny rafitra fizarana rivotra.
4, ny etona misy tsindry ambony dia miditra amin'ny palitao rano mangatsiaka
Rehefa ambany noho ny 50 temperature ny mari-pana amin'ny rano maotera dia sokafy ny fonony, afaka hitanao fa misy miboiboika miakatra sy mipoitra ao anaty fitoeran-drano, ary misy rivotra mafana be mivoaka avy ao am-bavan'ny fitoeran-drano. Rehefa miakatra tsikelikely ny mari-pana amin'ny motera dia nitombo tsikelikely koa ny hafanana avoaka avy amin'ny vavan'ny fitoeran-drano. Amin'ity tranga ity, raha voasakana ny fantsona mihoatra ny fantson-drano ary feno rano hatramin'ny sarony ny fitoeran-drano, dia miharihary kokoa ny fisehoan'ny bubble, ary ny tranga mangotraka dia hiseho amin'ny tranga henjana.
5, mandalo ny varingarin'ny motera sy ny palitao rano mangatsiaka na ny lalan'ny menaka manitra
Hisy menaka mavo-mainty manjelanjelatra mitsingevana eny ambonin'ilay rano mangatsiaka ao anaty fitoeran-drano na hisy rano miharihary ao anaty menaka ao anaty fitoeran-diloilo. Rehefa matotra ireo fisehoan-javatra roa mitsoka ireo dia hisy rano na menaka ho setroka.
Fotoana fandefasana: Jan-14-2021
Ny orinasa dia mitroka ny filozofia famolavolana iraisam-pirenena mandroso sy manamboatra teknika ary manao fanavaozana voalohany.
Inona no hitranga raha ny lasantsy lohan'ny varingarina ...
14,01,21Jona 16, 2017
Inona no tokony hojerena rehefa mametraka ...
Inona no hatao raha misy ny olana amin'ny ...
Raharaha marobe mila fiheverana ao amin'ny ...
Fampisehoana aorian'ny varingarina lohan'ny varingarina ...